Tao Anatin’ny Fotoana Voafetra, Nahazo Fahafahana Miditra Malalaka Tamin’ny Tranomboky Nomerika Ahitana Boky 100 000 Ny Kroaty · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, Français, عربي, English
Vehivavy iray mamaky ny ao anatin'ny “Fanaintainan'ny Fotoana iray” avy amin'ilay Kroaty mpanao hosodoko Vlaho Bukovac (1855-1922), PD.
Tamin'ny volana Desambra, lasa “Toerana Famakiamboky Maimaim-poana” ho an'ny mponina ao aminy maniry hametraka fampiasa manokana amin'ny findainy hahafahana mahazo miditra aminà toeram-pamakiamboky virtoaly i Kroasia.
Napetraky ny orinasa antsoina hoe Total Boox ireo Toeram-pamakiamboky maimaim-poana, izay manolotra fidirana amin'ny famakiamboky virtoaly amin'ny alalan'ny fampiasa manokana ho an'ireo mpamaky isan-karazany. Ho an'ny mpanjifan'ireo mpiara-miombona antoka aminy, toy ny trano famakiamboky sy andrim-panjakana hafa, dia maimaim-poana ny fidirana. Ho an'ny hafa, manana lasitra hafa hoe “tsy mandoa afa-tsy izay novakianao: raha mamaky 10% amin'ny boky virtoaly ianao, dia mandoa 10% amin'ny sarany”.
Tamin'ny Jona 2016, nametraka ny Toerana Famakiana Boky Maimaim-poana tany amin'ny fanjakàn'i Etazonia any Texas ny Total Boox, niarahany niasa tamin'ny Brazoria County Library System.
Avy eo, tamin'ny Septambra, natao ho toy ny modely ho an'ny Toeram-pamakiamboky Maimaim-poana any Kroasia ny toerana iray fisotroana kafe tao Zagreb. Nitarina ho hatramin'ny volana Desambra tao amin'ny firenena iray manontolo ilay faritra, niaraka tamin'ny famoahana fampiasa famakiana amin'ny finday Croatia Reads, azo raisina ho an'ny Android sy IOS.
Fahafahana mamaky maimaim-poana boky 100 000 no omen'ny fampiasa Croatia Reads, indrindra tamin'ny teny anglisy, ho an'ireo mpampiasa izany monina ao Kroasia. Tafiditra ao anatin'izany ny lohateny malazan'ireo mpanoratra ao an-toerana sy iraisam-pirenena. Ahitana boky virtoaly manodidina ny 260 avy any Kroasia, amin'ny teny Kroaty ny fizaràna iray manokana amin'ny trano famakiambokiny. Miampy isaky ny zoma ny lohateny noho ny fiarahana miasa amin'ireo mpanonta boky ao an-toerana.
Ho takalon'izay, tsy mandoa vola ireo mpampiasa rehefa mampiasa ilay fampiasa, fa takiana kosa tsy hiditra amin'ny angon-drakitr'izy ireo manokana. Hatramin'izao aloha, eo anelanelan'ny 10 000 sy 50 000 no tafapetraka.
Araka ny Netokracija, vavahadin-tserasera sangany amin'ny ICT Kroaty, ny toeram-mpamakiamboky maimaim-poana amin'ity volana ity dia tohanan'ny vavahadin-tserasera No Shelf Required. Miankina amin'ny fahitana mpanohana hafa ny fitohizan'ny fidirana maimaim-poana.
Mirela Rončević niteny tao amin'ny Fihaonambe Virtoaly 2013 nokarakarain'ny New Jersey Public Library. CC BY-NC
Manana faka Kroaty lalina ilay hetsika Faritra Famakiam-boky Maimaim-poana manontolo. Hevitr'i Mirela Rončević, Kroaty mpifindra monina any Etazonia, manam-pahaizana manokana amin'ny resaka votoaty sady mpisolovava ny fidirana malalaka izany. Avy amin'ny tanàna kely any Dalmatia izay tsy manana fivarotamboky, natambany ny faniriany manokana mba hanome fahafahana miditra amin'ny fahalalàna, ho toy ny zo fototry maha-olona, miaraka amin'ny fomba fandraharahàna misy fahaizana mamorona:
Mbola heveriko fa miankina amin'ny hoe aiza ianao no monina na inona ny andrim-panjakana misy anao ny fahafahana mamaky boky. Nefa rehefa manomboka misokatra amin'ny endrika nomerika ny boky rehetra, misokatra ho an'ny fiarahamonina rehetra izay te-hampiasa azy ny fahafahana manao izany.
Manome lanja ireo mpampiasa finday raitra izay tsy monina any Kroasia koa ilay fampiasa. Raha azo jifaina amin'ilay lasitra mandoa vola isaky ny mamaky ny ankamaroan'ny boky virtoaly, ny boky Kroaty kosa dia maimaim-poana.
Tsy misy ifandraisany amin'ity fivoaran-draharaha ity, ny sasany amin'ireo mpanoratra iraisam-pirenena izay manana boky tafiditra ao amin'ny angom-bokin'ny Total Boox dia efa namela izany sahady ho azo vakiana an-tserasera maimaim-poana amin'ny fampiasàna ny lisansa Creative Commons. Ohatra iray amin'izany ny boky “Overclocked” an'ilay Kanadiana mpanoratra tantara foronina sady mpikatroka mpiaro ny fiainana manokana, Cory Doctorow, izay azo alaina amin'ny endriny maro ao amin'ny tranonkalany.